F-111 ဝက် HUD စီမံကိန်း Navigation အခြေအနေ DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 35.7 ကို MB
downloads ရယူရန္ 24 567
အတွက် F-111 ဝက် HUD စီမံကိန်း-Navigation / အခြေအနေအသိအမြင်ယာဉ် FSX or P3D။ အပြီးအစီးလေယာဉ်ပျံ! အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအဖြစ်ရရှိနိုင်ဖြစ်နိုင်သည်အများဆုံးအဆင့်မြင့် NAV Pnl ။ ဒီအထူးဗားရှင်းက၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိမှာခြင်း simulation တွန်း။ သငျသညျ variable ကိုဂျီသြမေတြီအတောင်နှင့်အတူဤ All-ရာသီဥတုဗုံးခွဲသူပျံသန်းဖို့ငြင်းအပျြောအပါးရှိပါလိမ့်မယ်။ ပါဝင်သည်ထုံးစံအသံနှင့် (တစ်ဗုံးကျဆင်းနေအပါအဝင်!) ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအထူးသက်ရောက်မှု
သငျစာရွက်စာတမ်းဖတ်ရန်လုပ်ရမှာ : လက်စွဲစာမျက်နှာများတစ်ဒါဇင်ရှိပါတယ်, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်လမ်းညွှန်သင်ဤလေယာဉ်များ၏အမျိုးမျိုးသောစစ်ဆင်ရေးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်အဘို့ဤဗူးနှင့်အတူ, ဒီစာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်ဆင်းသည်တို့ပါဝင်သည်။